Forex Pips -2ကုန်သွယ်မှု 2022 လမ်းညွှန် ဇွန်လ 2022 ကို လေ့လာပါ။
Forex Pips - ကုန်သွယ်မှု2လမ်းညွှန်ကို လေ့လာပါ။
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 26 မေလ 2022
Forex အတွက် Pips? လူတိုင်းတွင်မတူညီသောကုန်သွယ်မှုပုံစံရှိသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ရာပေါင်းများစွာသောကွဲပြားခြားနားသောနည်းဗျူဟာများ၊ အယူအဆများနှင့်အကြံဥာဏ်များနှင့်စဉ်းစားရန်လှည့်ကွက်များစာသားရှိပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် 'pips' နှင့် 'pipettes' ဟူသော ဝေါဟာရများကို ကြားဖူးသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို လုံးဝသေချာမသိပါက၊ နောက်ဆက်၍မကြည့်တော့ပါ။ ငါတို့ မင်းကို ဖုံးကွယ်ထားပြီးပြီ။
Forex အရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါတွင် ငွေလဲနှုန်းပြောင်းသွားပုံနှင့် ၎င်းကို ကုန်သည်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင်မည်ကဲ့သို့ တိုင်းတာပုံဖော်သည်ကို နားလည်ရန် အမှန်တကယ်အရေးကြီးပါသည်။
ဒါက pips နဲ့ န့် အထဲဝင်ပါ။ ထိုအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Forex trading ၌အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကိုအာရုံစိုက်နေပြီးယင်းသည် forex pips ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အရာမှ၊ ၎င်းတို့ကို တွက်ချက်နည်း၊ pipettes အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် အခြားအရာများစွာကို လွှမ်းခြုံထားသော forex pip ဆိုင်ရာ ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ချက်ကို စုစည်းထားပါသည်။
အတိအကျ Pip ဆိုတာဘာလဲ။
'pip' ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် Forex trading လောကတွင် သင်မြင်တွေ့ကြားသိရမည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Pips သည် 'စျေးနှုန်းအတိုးနှုန်း' သို့မဟုတ် 'ရာခိုင်နှုန်းအမှတ်' အတွက် ရပ်တည်ရန် အသုံးပြုသည်။ သို့သော် pip ၏မူလအစကတည်းကအရာအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ 'အမှတ်များ'၊ 'pipettes' နှင့် 'lots' တို့ကိုလည်း ရည်ညွှန်းနေသူများ ကြားဖူးကြမည်မှာ သေချာသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းထက်ပိုပါသည်။
အစောပိုင်းကာလများတွင်၊ pip သည် Forex စျေးနှုန်းပြောင်းသွားမည့်အသေးဆုံးတိုးတက်မှုအတွက်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ယခုခေတ်တွင် ပွဲစားများနှင့် ကုန်သည်များ စျေးတက်စေသည့် နည်းလမ်းများသည် တိကျသောနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Forex သည် အချိန်နှင့်အမျှ ရွေ့လျားနေသည်။
ထုံးစံအရ Forex စျေးနှုန်းများကိုဒdecimalမဂရမ်လေးခုအဖြစ်ရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုမှာ pip တစ်ခုသည်နောက်ဆုံးဒdecimalမနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသေးငယ်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်တိုင်းတာသည့်နည်းလမ်း၏သရုပ်ဖော်ချက်ဖြစ်သည်။
ဥပမာတခု: GBP/USD သည် 1.1040 မှ 1.1041 သို့ ရွေ့သွားပါက၊ ဤနေရာတွင် တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုသည် 1 pip နှင့် ညီမျှသည်.
pip သည် အမြဲတမ်းမဟုတ်သောကြောင့် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ၎င်းသည် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး quotation မှာ decimal နေရာမဟုတ်တော့ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အချို့သော Forex စျေးနှုန်းများတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အပိုဆောင်း ဒမနေရာ။
ဤပြောင်းလဲမှုများကြားမှ pip သည် တသမတ်တည်းတန်ဖိုးရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ပလပ်ဖောင်းနှင့် ပွဲစားကုမ္ပဏီတိုင်းက ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ကုန်သည်များအား ၎င်းတို့၏ အသုံးအနှုန်းများကို ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်စေမည့် အရေးကြီးသော စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
pip သည် မူဘောင်ကို အတူတကွ ပေါင်းစပ်ပေးသောကြောင့် ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှု ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော သရဖူကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်၊ ဤစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည် ပန်းသီးနှင့်ငှက်ပျောသီးကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် အနည်းငယ်တူပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိုသို့သော ဘုံယူနစ်မပါဘဲ ဝေါဟာရများ ဆွေးနွေးရန် ကုန်သည်များအတွက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးမည်ဖြစ်သည်။
Forex Trading တွင်သင်၏ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးပြုခြင်း
ငွေကြေးကို သင်ဝယ်ယူလိုပါက 'မေး' စျေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူပြီး 'လေလံ' စျေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချရမည်ကို မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤသည်မှာ pip ကိုနားလည်ခြင်းသည် သင်၏ Forex အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုစနစ်သည်အမြတ် ၂၅ pips နှင့်အမြင့်ဆုံးဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်မှုမှတစ်ဆင့် 25 pips အထိဆုံးရှုံးရန်လိုအပ်သည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်း ၂ ခုသာရှိသည်။
သင်၏အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုသင်၏ဖွင့်ထားသောတန်ဖိုးသို့ထည့်။ သင်၏ stop loss တန်ဖိုးကိုတူညီသောအဆင့်မှနုတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ stop loss သို့ရောက်ရှိခြင်း၏အခွင့်အလမ်းများကိုလျော့ချသွားပြီးသင်၏အမြတ်အစွန်းမှာပျောက်ကွယ်သွားခြင်းကိုလည်းလျှော့ချပေးလိမ့်မည်။
နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကနှုတ်ဖို့ဖြစ်တယ် ပျံ့နှံ့ သင်၏ အမြတ်အစွန်းကို ရယူခြင်းအပြင် သင်၏ ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုမှ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် သင်၏ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုကိုရောက်ရှိပြီး အမြတ်ရယူရန် တူညီသောအခွင့်အရေးရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် သင်၏ အမြတ်အစွန်းများကို မြှင့်တင်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ သင်၏ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ဆုံးရှုံးမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ကမ်းလှမ်းချက်များပေါ်တွင်ပြန့်ပွားစဉ်းစားခြင်းနှင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်သင့်အား Forex စျေးကွက်တွင်အောင်မြင်မှုပိုမိုရရှိစေမည်။ ကျနော်တို့အများကြီးပိုနောက်ပိုင်းတွင်ဒီဖုံးလွှမ်း။
pip တစ်ခုချင်းစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စျေးနှုန်းတန်ဖိုးရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ သီးခြားငွေကြေးအတွဲအတွက် pip ၏တန်ဖိုးကို တွက်ချက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပိုက်တစ်ခု၏တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန်သင်နက်ရှိုင်းသောဗဟုသုတရှိရန်လိုအပ်ပါသလား။ ကောင်းပြီ, မအထူးသဖြင့်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်၏ပွဲစားသည်သင်၏အကောင့်၏ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပိုက်၏တန်ဖိုးကိုအလိုအလျောက်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင်၏ ကောက်နုတ်ချက်များကို တွက်ချက်ပုံအား ခိုင်မာစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းသည် သင်၏ Forex ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် သင်၏ စွန့်စားမှုများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင်သာ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ အလားအလာကောင်းများအပြင် ဆုံးရှုံးမှုများကို ချိန်ဆရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
သင်ငွေကြေးအတွဲကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလိုသည်ဆိုပါစို့ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ.
သင် ၁ ခုဝယ်သည် 1 lot သည် GBP ၁၀၀,၀၀၀ တန်မည်ဖြစ်ပြီး၊ GBP / USD အတွက် pip တစ်ခု၏တန်ဖိုးသည် ၀.1 ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၊ 1 lot အတွက် 1 pip ၏ငွေကြေးတန်ဖိုးသည် ၁၀၀၀၀၀ x ၀.၀၀၀၁ = ၁၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
ဒီ Forex ငွေကြေးအတွဲအတွက်အမြတ်အစွန်း (သို့) အရှုံးကိုပိုက်တစ်ခုစီအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာဖြင့်တွက်ချက်မည်ကိုသင်သိသည်။
အရာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် GBP/USD နှင့်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY.
ငွေလဲနှုန်း GBP / USD ၏နှုန်းသည် 1.2675 ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ 1 GBP သည် USD 1.2675 နှင့်ညီသည်။
ယခု အခြေခံတန်ဖိုး (ဤကိစ္စတွင် GBP) သို့ရောက်သောအခါ pip တန်ဖိုးကို တွက်ချက်ရန်အတွက် သင်သည် ငွေလဲနှုန်းဖြင့် ဒုတိယငွေကြေး (ဤကိစ္စတွင် USD) ၏ တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုကို မြှောက်ရပါမည်။
ဤအရာသည် မည်သို့မည်ပုံဖြစ်သည်- 0.0001*(1/1.2675 =0.0000788955)။
ဒါဆိုမင်းရဲ့အရွယ်အစားက 200,000 လို့ပြောကြရအောင်။ ဆိုလိုသည်မှာပိုက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုသည်သင့်အား£ 15.77 ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ငွေကြေးအတွဲ USD / JPY နှုန်းသည် ၁၀၆.၇၆ တွင်ရှိလျှင် ၁ ဒေါ်လာသည် ၁၀၆.၇၆ ယန်းနှင့်ညီသည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။
အခု pip ကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်ဒdecimalမကိန်းလေးခုကိုသုံးမယ့်အစား၊ ငါတို့နှစ်ခုသုံးမယ်။
ဤကိစ္စတွင်တွက်ချက်မှုသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - 0.01 * (1 / 106.76) = 0.000093668 ။
ဒါဆိုမင်းရဲ့အရွယ်အစား 200,000 လို့ပြောကြရအောင်။ တူညီသောတွက်ချက်မှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ 1 pip ပြောင်းလဲခြင်းသည်သင့်အားဒေါ်လာ ၁၈.၇၃ ကုန်ကျမည်။ ဒီတော့ခင်ဗျားတို့မှာရှိတာက၊ ဒီမြင်ကွင်းမှာခင်ဗျားရဲ့ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတစ်ခုတည်းတန်ဘိုးပါလိမ့်မယ်။
သတိပြုပါ။ ငွေကြေးနှုန်းသည် အတက်အကျ အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေသောကြောင့်၊ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော မည်သည့်တန်ဖိုးကိုမဆို အနီးစပ်ဆုံးတန်ဖိုးအဖြစ် ရေတွက်ရပါမည်။ ထို့ကြောင့်၊ single pip ၏တန်ဖိုးမှာလည်း အဆက်မပြတ်အတက်အကျရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင်သည် သင်၏ pip တန်ဖိုးကို သိလိုပါက ၎င်းကို သင်၏ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းတွင် ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်း သတိရပါ။ စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိတိုင်း ပြန်လည်တွက်ချက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် ၎င်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ တွက်ချက်နိုင်သည်ကို နားလည်ရန် အထောက်အကူဖြစ်သေးသည်။
ယခု သင်သည် pips များနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များစွာကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ သင်၏ Forex ကုန်သွယ်မှုများတွင် ၎င်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်း သင့်တွင် အကြံကောင်းရှိသည်။
Forex ကုန်သွယ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် pips သည် ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီ၏ ရလဒ်အတွက် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းတစ်လျှောက် တတ်နိုင်သမျှ လေ့လာရန် အရေးကြီးပါသည်။
Pip Forex မမှန်ခြင်းနှင့် Pipettes
အခြေခံအားဖြင့်၊ 'pipette' သည် standard pip ၏ 1/10th နှင့် ညီမျှသည်။ Pipettes ကို 'Fractional Pips' ဟုခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင်၏ Forex ပွဲစားထံမှ သင်ရရှိသော စျေးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုအများစုသည် ဒဿမအမှတ်လေးခုကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ငြားလည်းပွဲစားအချို့ကမူငွေကြေးတန်ဖိုးရှိသည့်စုံတွဲသည်ပုံမှန်ဒ2မ ၂ နှင့် ၄ နေရာအပြင်ဘက်သို့သွားသောအခါ pipetti များကိုကိုးကားကြသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းတို့တွင်နေရာ ၃ ခုနှင့် ၅ ခုရှိနိုင်သည်။ ဤအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာကြီးမားသောကွာခြားချက်များရှိသည်။ ဤချွင်းချက်၏စံနမူနာမှာဂျပန်ယန်းပါဝင်သောငွေကြေးအတွဲဖြစ်သည်။
GBP/USD သည် စျေးနှုန်း 1.2675 ရှိသည်ဟု စိတ်ကူးကြည့်ကြပါစို့။
ယခု USD / JPY ၏ငွေကြေးအတွဲကို ၁၀၆.၇၆ အဖြစ်ဖော်ပြပါမည်။
သငျသညျတတ်နိုင်သကဲ့သို့, နှစ်ခုနှစ်ခုအကြားတန်ဖိုးကိုတစ် ဦး သိသိသာသာခြားနားချက်ရှိပါတယ်ကြည့်ပါ။
ဒီဥပမာကိုသုံးပြီး 1 GBP အတွက်ဒေါ်လာ ၁.၃၀ နီးပါးရနိုင်တယ်။ တစ်ဒေါ်လာလျှင်ဂျပန်ယန်း ၁၀၇ နီးပါးရနိုင်သည်။ ဒုတိယစုံတွဲသည်ဒdecimalမအမှတ်ပြီးနောက်နံပါတ်နှစ်ခုသာရှိသည်ကိုသင်မြင်သည့်နေရာတွင်၊ ဤစုံတွဲရှိပိုက်ကိုဒုတိယနံပါတ်ဖြင့်ပြသည်။
နည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ယခင်ကထက် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်အနည်းငယ်ရှိသည်။ သင်၏ကိုးကားချက်များသည်ယခုအချိန်တွင် ပို၍ တိကျပြီး 5th နှင့် 3th decimal points များကိုလည်းထည့်သွင်းသွားမည်။ ဤသည်4နှင့်2င်အားလုံးအတွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျရှုပ်ထွေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပိုက်၏အခြေခံအုတ်မြစ်နေဆဲရပ်တည်။ အကယ်၍ သင်၏ကိုးကားချက်တွင်ဒplacesမနေရာ ၄ ခုရှိလျှင် ၄ င်းသည် ၄ ​​ထပ်ကိန်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုးကားချက်တွင်နေရာနှစ်ခုရှိပါက pip သည်ဒုတိယမြောက်နံပါတ် (ဒdecimalမအမှတ်ပြီးနောက်) ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ 'အမှတ်' နှင့် 'အပိုင်းကိန်း pips' ကဲ့သို့သော pipette များအတွက် အမည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
သင့်ပွဲစားက ၎င်းတို့ကို မည်သို့ခေါ်ဆိုသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးအတွဲများတွင် အသေးစားပြောင်းလဲမှုများကို စစ်ဆေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် 'scalpers' အသုံးများသည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည့် အသေးစား အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးဝင်သည်။
Forex pips- Forex Quotation တွင် နံပါတ်တစ်ခုစီက ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
Forex ကိုရှင်းလင်းရန်အတွက်အခိုးအငွေ့ထပ်မံထွက်လာသည်။ သင်၏ Forexကိုးကားချက်ရှိ နံပါတ်တစ်ခုစီသည် အဘယ်အရာကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း အတိုချုံး ရှင်းပြထားပါသည်။
လွယ်ကူစေရန်သင်၏ကိုးကားချက် ၁.၂၃၄၅၆ ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။
1 = 10,000 pips
2 = 2,000 pips
3 = 300 pips
4 = 40 pips
5 =5pips
6 = 0.6 pips
အပေါ်ကဥပမာကမတရားဘူးဆိုရင်မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါဟာ Forex quotation မှာနံပါတ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်ကူညီပေးလိမ့်မယ်။
Forex ကုန်သွယ် pips ဥပမာ
အရာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်၊ ကုန်သည်အများအပြားသည် တစ်ခုတည်းသော pip ကုန်သွယ်မှုကို ဆယ်ယူနစ် (အခြေခံငွေကြေး) အဖြစ် ရေတွက်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် အထက်က ဥပမာတွေကနေ ပြောပြနိုင်သလို အနီးစပ်ဆုံး ၁၀ ခုပဲ ရှိပါတယ်။
pips တွင် သင်၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အမြတ်များကို တွက်ချက်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ သင်၏ pip တန်ဖိုးသင်္ချာသည် အမှတ်အသားဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရမည်။ မဟုတ်ပါက၊ သင်သည် ဤအရာကို တိကျသောပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ဒီလမ်းညွှန်စာအုပ်အတွင်းမှာပဲ၊ ငါတို့ဟာတူညီတဲ့ငွေကြေးအတွဲတွေ၊ ၎င်းသည်နားလည်လွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုတို့ဖြင့်နားလည်ရန်များစွာလွယ်ကူစေသည်။
ငွေကြေးအတွဲ GBP / USD: သင် ၁.၂၆၇ ၏ဥပမာတွင်နှုန်းကို အသုံးပြု၍ သင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ၀ ယ်ခဲ့သည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်ပေါင် ၁၂၆,၇၅၀ ဖြစ်သည်။
ယခုဆိုလာမည့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းနှုန်းသည် ၁.၂၆၈၉ သို့တက်သည်ဆိုပါစို့။ သင်စတင်ချိန်ထက် ၁၄ ဆပိုသည်။
သင်ယခုသင်၏ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်၏အမြတ်သည်အထက်တွင်တွက်ချက်သည့်ပိုက်တန်ဖိုး (ပေါင် ၁၅.၇၇) ဖြင့်မြှောက်ပါလိမ့်မည်။ ဒါက£ 220.78 နှင့်ညီသည်။
ငွေကြေးအတွဲ USD / JPY: So ယခုတွင်သင်သည် USD / JPY ၏အနည်းဆုံးတစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၀၆.၇၆ ဖြင့်ရောင်းချနေသည်။
တစ်ကွက်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ နှင့်ညီမျှသည်။ ၎င်းသည် ၁၀,၆၇၆,၀၀၀ ဂျပန်ယန်းဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စတွင်စျေးနှုန်းသင့်အပေါ်ဆန့်ကျင်နေသဖြင့်သင်သည် ၁၀၆.၈၂ JPY တွင်အရှုံးပေးရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့ $100,000 ကို မင်းဆီပြန်ရနိုင်မယ့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက 10,676,112.38 ဖြစ်တဲ့ နှုန်းထားအသစ်ကို ပေးချေဖို့ပါပဲ။
pips အတွက်ခြားနားချက် 112.38 ဖြစ်ခြင်း။
ထပ်မံ၍ သင် pips များကိုရေတွက်ခြင်းသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
Forex စုံ Volatility
ကျွန်ုပ်တို့သည် Forex ကုန်သွယ်မှုတွင် pips ၏အရေးပါမှုကို ဖြေရှင်းထားပါသည်။ forex အတွဲများ၏ မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ၎င်းကို မကြာခဏ ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ခုသည် တစ်ရက်လျှင် pips မည်မျှရွေ့လျားသည်ကို မကြာခဏ ဖော်ပြသည်။
Cross pair များသည်အဓိကစွမ်းအားများ (တစ်နေ့တာလုံး) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုကြီးမားသော pip လှုပ်ရှားမှုများကိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုအတော်အတန်နည်းသောငွေဖြစ်လွယ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ငွေကြေးအတွဲများ၏ pip မတည်ငြိမ်မှုသည် ဝယ်သူနှင့်ရောင်းသူအနည်းငယ်သာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုအပေါ် အားတက်စရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောကြောင့် ငွေဖြစ်လွယ်ခြင်းအတွက် ကြီးမားပါသည်။ ဒါကြောင့် ထူးခြားဆန်းပြားအတွဲတွေ ကြိုက်တယ်။ USD / MXN နှင့် EUR / HUF တစ်ရက်လျှင် pips ရာနှင့်ချီ၍ ရွေ့လျားသည်။
များစွာသော Forex ကုန်သည်များသည်မတည်ငြိမ်သောငွေကြေးအတွဲများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖန်တီးသည့်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသောကြောင့်မတည်ငြိမ်သောငွေကြေးအတွဲများကိုထောက်ခံခြင်းဖြင့်ကျိန်ဆိုကြသည်။
Forex Pips နှင့်ပြန့်နှံ့
အထက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍများတွင် pip သည် မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းပြထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ပျံ့နှံ့မှုကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြရန် အကြံကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ပြန့်ပွားမှုဟာလေလံနှုန်းနှင့်ကွာခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးငွေကြေးတစ်ခုစီရဲ့ဈေးနှုန်းကိုအတွဲတစ်တွဲကနေမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုယနေ့စာမျက်နှာ၏ကြယ်ပွင့်များဖြင့်တိုင်းတာသည်။
အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုပြီးမြောက်သောအခါတွင် အရှုံးကိုတွေ့လိမ့်မည် (ဤသည်မှာ ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်သည်)။ အကြောင်းရင်းမှာ သင်သည် စျေးကွက်ရှိစျေးနှုန်းထက် မြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့် ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုကို ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
စျေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် သင့်စျေးနှုန်းအကြား ကွာခြားချက်မှာ ပွဲစားမှ အခကြေးငွေရရှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းကို ကော်မရှင်အခကြေးငွေအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ Forex spread ၏ဥပမာအချို့ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်၎င်းကို pips များနှင့်မည်သို့အကဲဖြတ်နိုင်သည်ကိုမြင်နိုင်သည်။
EUR / USD (ဒdecimalမအချက် ၄ ခု) ပေါ်တွင်ဖြန့်ပါ။ ဥပမာအနေနှင့်လေလံဈေးနှုန်းမှာ ၁.၄၁၀ ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါစို့0 နှင့်တောင်းစျေးနှုန်း 1.410 ဖြစ်ပါတယ်4။ ဒီမှာပျံ့နှံ့နေသည် 1.4104 - 1.4100 = 0.0004 သို့မဟုတ်4pips ။
USD / JPY (ဒdecimalမ ၂ မှတ်) ပေါ်တွင်ဖြန့်ပါ။ ဤဥပမာတွင်လေလံစျေးနှုန်းမှာ ၁၁၄.၁ ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါစို့1 နှင့်တောင်းစျေးနှုန်း 114.1 ဖြစ်ပါတယ်7။ ဒီမှာပျံ့နှံ့နေသည် 114.17 - 114.11 = 0.06 သို့မဟုတ်6pips.
GBP / USD ဖြင့်ဖြန့်ပါ (ဒdecimalမ ၅ လုံး) ဤအချိန်လေလံစျေးနှုန်း 1.410 ဖြစ်ပါတယ်04 နှင့်တောင်းစျေးနှုန်း 1.410 ဖြစ်ပါတယ်23 ။ ဒီမှာပျံ့နှံ့နေသည် 1.41023 - 1.41004 = 0.0019 သို့မဟုတ် 1.9 pips ။ တနည်းအားဖြင့်, 19 ဒalမကိန်း pips ။
USD / JPY (ဒdecimalမသုံးခု) ပေါ်တွင်ဖြန့်ပါ။ ဤဥပမာတွင်လေလံဈေးသည် ၈၆.၇ ဖြစ်သည်70 နှင့်တောင်းစျေးနှုန်း 86.7 ဖြစ်ပါတယ်82။ ဒီမှာပျံ့နှံ့နေသည် 86.782 - 86.770 = 0.012 သို့မဟုတ် 1.2 pips။ တနည်းအားဖြင့်, 12 ဒalမကိန်း pips ။
အခုစာရေးက 100,000 နဲ့ ဖြန့်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ကြည့်ရအောင်။ ဤနေရာတွင် ပထမဥပမာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည်4(pips) x 100,000 x5= $200 တွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။
တွက်ချက်ခြင်း ပျံ့နှံ့ ဘယ်အချိန်မှာ Forex ကုန်သွယ်သင့်ရဲ့ရေရှည်မဟာဗျူဟာ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မယ့်အခါ။ ထို့ကြောင့်၊ pips နှင့် spreads တို့၏သင်၏အသိပညာသည်အသုံးဝင်ဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
Forex Traders များအသုံးများသော ပျံ့နှံ့မှု အမျိုးအစား အနည်းငယ်ရှိပါသည်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့: စျေးနှုန်းအခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေဈေးနှုန်းပျံ့နှံ့မှုသည်ဈေးနှုန်းနှင့် ၀ ယ်လိုအားနှင့်တသမတ်တည်းရှိနေသည်။
variable: ဤအမျိုးအစားကိုတစ်ခါတစ်ရံ 'floating' ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစျေးကွက်အတက်အကျကြောင့်ငွေကြေးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ စျေးကွက်မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသည့်အချိန်တွင်ပြန့်ပွားမှုနိမ့်ကျလိမ့်မည်။ တစ်ဖက်တွင်စျေးကွက်တက်ကြွလာသောအခါပျံ့နှံ့နှုန်းမြင့်မားလိမ့်မည်။
extension နဲ့ Fixed: အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ပြီးရောင်းချသူကအခြားတစ်ဖက်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့၊ ကုန်သည်သည် ၀ ယ်စျေးနှုန်းပေါ် မူတည်၍ အချို့သောငွေကြေးတစ်ခု၏ရောင်းဈေးကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အကယ်၍ ၀ ယ်ဈေးသည်မြင့်မားသောဘက်တွင်ရှိပါကကုန်သည်သည်ထိုငွေကြေးကိုရောင်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော်နောက်ထပ် ၅% ထပ်တိုးသည်။
မြင့်မားသောစျေးဝယ်ခြင်းသည် သင့်အရောင်းအ၀ယ်စတင်ချိန်တွင် အရှုံးပေါ်စေနိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေက များတယ်။
နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှု သို့မဟုတ် ငွေကြေးအကျပ်အတည်းကဲ့သို့သော စျေးကွက်အခြေအနေအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Forex အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သည့်အခါ ငွေကြေးသတင်းများကို လိုက်နာရန် အကြံကောင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ပြန့်ပွားမှုကိုနားလည်ခြင်းသည်မည်သည့်ပွဲစားများသည်အနိမ့်ဆုံးပြန့်ပွားမှုကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည် Forex ဈေးကွက်.
Pips ကိုအသုံးပြု။ Forex မဟာဗျူဟာ
ကုန်သည်များစွာသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအပိုင်းများကိုကျော်ပြီးခြင်္သေ့တွင်းထဲသို့ရေငုပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြသည်။ ပြwithနာကဆယ်ကိုးကထဲကကိုးဆလောက်၊ မင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသွားပြီးဒီအရာတွေကိုသုတေသနလုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာများ အစပြုသူများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောကုန်သည်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တာထက်မဟာဗျူဟာကိုစတင်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းကဘာလဲ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, y ကိုကျွန်ုပ်တို့၏နည်းဗျူဟာသည်သင်စျေးကွက်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖွင့်လှစ်သင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Pips သည် ယနေ့ခေတ်တွင် စောင့်ကြည့်ရန် အလွန်လွယ်ကူသည်ဟု ယူဆကြပြီး ယခုအခါ ကုန်သည်များသည် တိကျသော pips အရေအတွက်ကို ရရှိရန်အတွက် ဗဟိုပြုသော နည်းဗျူဟာများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရည်မှန်းချက်သည်တစ်နေ့လျှင် 10 pip ရရှိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤနည်းဗျူဟာများ၌လိုအပ်သော pips ပမာဏသည်အလွန်ကွဲပြားပြီး ၁၀ ခုမှတစ်ရာအထိရှိသော pips များနှင့်တစ်ခုစီကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ကာလတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ဤကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာ၏ရည်မှန်းချက်မှာ (ထိုအချိန်ကာလအတွင်း) pips အရေအတွက်နှင့်ညီမျှသောအမြတ်အစွန်းများရရှိရန်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် forex တွင်မည်သို့ရှိနေသည်ကိုသတိထားမိလာပြီး၊ ဝယ်လိုအားရှိသောငွေကြေးအတွဲများသည်အရည်အများဆုံးငွေပမာဏဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် GBP / USD ကဲ့သို့အရည်အချင်းစုံတွဲသည်ကုန်သည်တစ် ဦး ၏တစ်နေ့လျှင် pips ၅၀ ကိုရည်မှန်းနိုင်သည့်ကုန်သည်၏ပိုက်လိုင်းမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
သင့်အမြတ်အစွန်းအလားအလာကို သင်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် သင့်အန္တရာယ်များကို ဦးစားပေးတွက်ချက်ရန် အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏အစီအစဉ်သည် 12 pip ရရှိရန်ဆိုလျှင်၊ သင်သည် အခြား5ထက်မပိုရန် သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်၊ သင်သည် သင်၏ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော pip တန်ဖိုးကို စျေးနှုန်းကျော်လွန်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက် သေချာစေရန်အတွက် stop-loss အမိန့်ကို သတ်မှတ်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏ stop-loss သည် အလိုအလျောက် ကစားသွားမည်ဖြစ်သည်။
MetaTrader4နှင့် Forex Pips
MetaTrader4သည် အာကာသအတွင်း အကျယ်ပြန့်ဆုံး လူကြိုက်များသော Forex ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲတွင်ထားပါ၊ pips နှင့်သက်ဆိုင်သော platform မည်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလျင်အမြန်ဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ MetaTrader4မှပေးသော အမှာစာ window ကိုတွေ့သောအခါ၊ pips အရေအတွက်ကို တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။
Order window တွင်ပလက်ဖောင်း၏ 'modify order' အပိုင်းသို့သွားပါ။
ယခုသင်အလိုအလျောက်ကွပ်မျက်ခံရလိုသော ၀ င်ငွေနှင့်ရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်၏ဖြတ်တောက်ထားသည့်အချက်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အမြတ်အစွန်းယူတဲ့အမိန့်စာတွေဟာ ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုအမိန့်နဲ့ အလားတူနည်းလမ်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်ကို ထိပြီးသည်နှင့် သင်သည် သင်၏ရာထူးကို အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Laymen ၏စည်းကမ်းချက်များရှိ 'level' သည်စျေးနှုန်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတို့သည်သတ်မှတ်ထားသောနေရာတစ်ခုတွင်ဇယားတစ်ခုမှမျဉ်းတစ်ကြောင်းဆွဲလိမ့်မည်။ အဆင့်များသည် pips များအစားအချက်များအသုံးပြုသည်ကိုထောက်ရှု။ ၊ pipetti ရှိသင်တွေ့ရှိသောဗဟုသုတအသစ်ကိုသင်အသုံးချသင့်သည်။
တစ်ခုမှာ MetaTrader4တစ်ခု၊ အမှတ်သည် 1 pip ၏ ၁/၁၀ နှင့်ညီသည်။ ထို့ကြောင့် 10 မှတ်ကိုရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်၏အဆင့်သည်ကန ဦး နှုန်းမှ 1 pips ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုဇယားရှိအဆင့်ကိုဖော်ပြသည့်အမြင့်တွင် MetaTrader 20 သည်ထိုအကွာအဝေးရှိနှုန်းကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ အကြံဥာဏ်မှာဆိုင်းငံ့ထားသောမည်သည့်အမိန့်ကိုမဆိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးစိုးရိမ်မှုကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်
Pip-based မဟာဗျူဟာကိုအသုံးချရန်အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများ
Forex ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုသင်ဖတ်ရှုပြီးပြီဆိုလျှင်ထိုဖြစ်ရပ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်ကောင်းစွာနားလည်ထားသင့်သည်။ အဲဒီလိုဆိုရင် - သင်သည်သင်၏ pip-based နည်းဗျူဟာကိုစမ်းသုံးကြည့်လိုပါကအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများစာရင်းကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
1. AVATrade –2x $200 Forex ကြိုဆိုရေး ဘောနပ်စ်များ (စည်းမျဉ်းက ဘောနပ်စ်ခွင့်ပြုချက်ကို အတည်ပြုသည်)
AvaTrade သည် Forex၊ အညွှန်းကိန်းများ၊ စတော့များ၊ cryptocurrencies နှင့် အခြားအရာများစွာကို ပေးဆောင်သည့် အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော အွန်လိုင်း CFD ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကုန်သွယ်ကိရိယာများ၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများ အစုအဝေးကို ထားရှိပေးသည် - နှင့် သင်သည် MT4 သို့လည်း ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံး အပ်ငွေသည် $100 မှ စတင်ပြီး အကောင့်အသစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း အများစုသည် forex ကြိုဆိုသော ဘောနပ်စ်များ ပါရှိပါသည်။
ဘောနပ်စ်မရရှိမီ သင့်အကောင့်ကို အတည်ပြုပါ။
Capital.com သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည့် FCA မှ ထိန်းချုပ်ထားသော အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ CFDs ပုံစံဖြင့် အားလုံးသည် စတော့များ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အကျုံးဝင်သည်။ သင်သည် ကော်မရှင်အတွက် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ပေးဆောင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ပျံ့နှံ့မှုများသည် အလွန်တင်းကျပ်ပါသည်။ Leverage အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုလည်း ကမ်းလှမ်းထားသည် - ESMA ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ အပြည့်အဝ။
တစ်ဖန်၊ ၎င်းသည် 1:30 တွင် majors နှင့် 1:20 တွင် အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့် exotics တွင်ရပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဥရောပပြင်ပတွင် အခြေစိုက်နေပါက သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖောက်သည်တစ်ဦးဟု မှတ်ယူပါက၊ သင်သည် ပိုမိုမြင့်မားသော ကန့်သတ်ချက်များကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပလပ်ဖောင်းသည် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်များ၊ အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ဘဏ်အကောင့်လွှဲပြောင်းမှုများကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် Capital.com ထဲသို့ ငွေရယူခြင်းသည်လည်း ရိုးရှင်းပါသည်။ အကောင်းဆုံးမှာ၊ သင်သည် 20 £/$ ဖြင့်စတင်နိုင်သည်။
Forex Pips- နိဂုံးချုပ်ရန်
Forex pips သည် အဘယ်အရာနှင့် ၎င်းတို့သည် ကုန်သည်များအတွက် မည်ကဲ့သို့ အသုံးဝင်ကြောင်း ရှင်းပြရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြို့သို့ အမှန်တကယ်သွားခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ pips သည် သေးငယ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် Punch ထုပ်ပိုးခြင်းမရှိဟု မဆိုလိုပါ။ အမှန်မှာ၊ ကုန်သည်များစွာက pips များသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလုံး၏အကြီးမားဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
နောက်ဆုံးဒdecimalမအမှတ်တွင်ပြောင်းရွေ့မှုတစ်ခုချင်းစီသည်အတူတကွပေါင်းစည်း။ ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်း (သို့) ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ငွေကြေးသတင်းများ၊ ဇယားများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် စျေးနှုန်းတွင် အရေးမပါဟုထင်ရသော အပြောင်းအလဲများကို လေ့လာခြင်းသည် သင်၏ Forex ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံကို ကြွယ်ဝစေမည်ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင် pip-based မဟာဗျူဟာစမ်းမကြိုးစား? အခြားကုန်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကဲ့သို့ပင်၊ အခြားနည်းစနစ်များနှင့်တွဲသုံးသောအခါများသောအားဖြင့်ပိုမိုထိရောက်ပါသည်
Forex Pips- FAQ
pip ဆိုတာ ဘာလဲ
အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ပြန့်ပွားမှုကငွေကြေးစုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ 'ask' price နဲ့ 'bid' စျေးနှုန်းကွာခြားချက်ဖြစ်တယ်။
ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၂၅၇၁ မှ ၁.၂၅၇၂ သို့ပြောင်းသည် - ၁ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်။
မဟုတ်ရင် 'pipette' လို့ခေါ်တယ်၊ ဒါက standard pip ရဲ့ဆယ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်တယ်။
ငွေကြေးအားလုံးကိုဒdecimalမကိန်း ၄ ခုဖြင့်တိုင်းတာပါသလား။
ငွေကြေးအတွဲအားလုံးသည်ဒdecimalမ ၂ နေရာဖြစ်သောယန်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်